पोखरा थिएटर दोस्रो वर्षमा प्रवेश – Tandav News
ताण्डव न्यूज द्वारा	 २०७५ फाल्गुन २ गते बिहीबार १६:२२ मा प्रकाशित
पोखरा थिएटरले पहिलाे वर्ष पूरा भई दोस्रो वर्षमा प्रवेश गरेको उपलक्ष्यमा बिहीबार एक कार्यक्रमको आयोजना गर्यो । गन्र्धव नाटकघरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्ने वक्त्ताहरुले पोखरामा नाटकघर सञ्चालनमा आएपछिको पहिलो वर्ष सुखद भएपनि यसको दिगोपनाको लागि सबैको सर्पोट आवश्यक पर्ने कुरामा जोड दिए ।
पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ४ का वडाध्यक्ष शंकरप्रसाद कोइरालाले पोखराको रंगकर्मको लागि वडा तथा महानगरपालिकाबाट दिर्घकालिन योजना पार्ने प्रयास आफुले गर्ने उनले वाचा गरे । ‘रंगकर्मको लागि राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ, यसको लागि सबैलाई बुझाउन जरुरी छ’ उनले भने । शुरुमा आफू पनि केहि अलमलिएको उनले सुनाए ।
जब थिएटरको बारेमा बुझे त्यसपछाडी यसको विकासको लागि आफ्नो ठाउँबाट पहल र सहयोग गर्न तत्पर बनेको उनले बताए । पोखरा थिएटरका क्रियटिभ डाइरेक्टर परिवर्तनले थिएटर सञ्चालन गर्दाका केहि अनुभव सुनाए । एक वर्षको अवधिमा थिएटरले उल्लेखनीय कार्य गरेपनि यसको दिगोपनाको लागि चुनौती रहेको उनले सुनाए । यसको लागि सबैतर्फबाट साथ र सहयोग मिल्नेमा आफु आशावादी रहेको उनले बताए ।
युथ क्रियशन थिएटरका सचिव सौगात पोखरेलले पोखरेली नाट्य क्षेत्रलाई अगाडी बढाउन सबै हातेमालो गरी अगाडी बढ्नुपर्ने बताए । पोखरा थिएटर र युथ क्रियशन थिएटरको मिलेरै पोखराको नाट्य क्षेत्रमा अगाडी बढ्ने उनले सुनाए । पोखरा नाटक हेर्छ’ अभियान सञ्चालन गरी नाट्य क्षेत्र तर्फको आर्कषण बढाउन सबै लाग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
प्रथम वार्षिकोत्सवको अवसरमा थिएटरले वेभसाइट समेत लञ्च गरियोे । सोही अवसरमा पोखरा थिएटरले विभिन्न समयमा आयोजनाको गरेको अभिनय कार्यशालामा सहभागीलाई प्रमाणपत्र समेत वितरण गरियो । पोखरा थिएटरको उद्घाटन २०७४ फागुन २ गते गरिएको थियो । एक वर्षको अवधिमा यहाँ विभिन्न २३ वटा नाटक मञ्चन भए । जसमध्ये पोखरा थिएटरको आफ्नै प्रस्तुतिका ५ नाटक थिए ।
महोत्सवमा भारतको ब्लाक एण्ड ह्ववाइट र इन ट्रान्जीट, श्रीलङ्काको लव एण्ड लाइफ, मेसेडोनियाको प्राइभेट कन्फेन्सन, नेपालका मेमोरी यार्ड, गैडा टाइम्स, निरमाया र घेरो नाटक मञ्चन हुने पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराइयो । महोत्सव सम्पन्न गर्न ६१ लाख खर्च लाग्ने आयोजकको अनुमान छ ।
भरतपुरमा हवाई र यात्रु संख्या बढे
विघटनविरुद्ध डा. केसीद्धारा सत्याग्रह घोषणा, सत्याग्रह फागुन १२ देखि